May Nyane: ကိုဝသုန်..
ဟုတ်ပါ့….ဆရာမရေ….“ကိုယ့်လူတွေကတော့ တဖြုတ်ဖြုတ်ဘဲဗျိုး” ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘဲ….
၀သုန်ရဲ့ မဂ္ဂဇင်းသရုပ်ဖော်လက်ရာလေးတွေက တကယ်ဘဲ စွဲမက်စရာပါ။ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးမှာ အမျိုးသမီးတယောက်အာကာသထဲမှာ လွင့်မျောနေသလိုလိုိ အပေါ်မှာ ဆံနွယ်တွေပျံ့လွင့်နေပြီး အောက်မှာ ကိုယ်လုံးကလေးက တွဲရရွဲခြေလှမ်းလှမ်းနေပုံလေးကို မြင်ယောင်မိတယ်။ လက်မှာလည်း ဒင်္ဂါးပြားလို အပြားလေးတွေပါတဲ့ ဟဲန်ချိန်းလေးနဲ့။ ပါတိတ်ပန်းချီတွေ ခေတ်မစားခင် အဲသည်လို တကြောင်းဆွဲလေးတွေနဲ့ ၀သုန်လက်ရာကို ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ကြိုက်မှကြိုက်ပေါ့။ လင်္ကာဒီပ ချစ်သူ သရုပ်ဖော်အပါအ၀င်ပေါ့။
အဲသည်တုန်းက မဂ္ဂဇင်းသရုပ်ဖော်ဆရာတွေကလည်း တကယ်ဘဲ လက်စွမ်းပြကြ၊ ထက်ကြတယ်နော်။ ဆရာမောင်စိန်ဆိုရင် ကျနော်မှတ်မိတယ်။ မောင်ကိုယုရဲ့ “မနေ့က လရောင်အောက်မှာ” ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်ကို သရုပ်ဖော်တာလေ။ ဆရာမောင်ကိုယုရဲ့ ၀တ္ထုလေးကိုယ်၌က အချစ်ဝတ္ထု၊ ဆွတ်ပျံ့စရာလည်းကောင်း၊ ကြေကွဲစရာလည်း ကောင်းရတဲ့အထဲမှာ ဆရာမောင်စိန်ရဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံလေးတွေကလည်း ပြောင်မြောက်လှသဗျာ။ ကျနော်တို့မောင်နှမတတွေ အဲသည် ၀တ္ထုဖတ်တုန်းကဆို မျက်ရည်များတောင် ကျရပါရဲ့။
၀သုန်တို့ မောင်စိန်တို့ရဲ့ တကြောင်းဆွဲ ပန်းချီလေးတွေကို လွမ်းမိတော့တယ်ဗျာ။ ပြောရရင် အဲသည်တုန်းက ခေတ်ကိုတောင် ပြန်လွမ်းသလိုပါဘဲ။ ၀တ္ထုတို ရွှေခေတ်လို့ ပြောကြတဲ့ ခေတ်ပေါ့နော်။
မ ရေ… ကျွန်မ အပြင်မှာ ပထမဆုံးမြင်ဖူးတဲ့ ပန်းချီပညာရှင်က (ဦး)၀သုန်ပါ…
အရပ်မြင့်မြင့်ရယ် တစုံတခုကို အမြဲတွေးတောနေပုံရတဲ့ ခပ်ငေးငေးမျက်ဝန်းတွေရယ် အ၀တ်များတဲ့ ရှပ်ဖြူဖြူတွေရယ်က (ဦး)၀သုန်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေပေါ့…
တချို့တိတ်ဆိတ်တဲ့ညတွေမှာ လေထဲမှာ လွင့်မျောလာတဲ့ သူ့ လက်ရာ မြန်မာ့ဂီတသံတွေကို ခံစားရတာများ အိပ်မက်လိုလို…
ဟိုတလောကပဲ သူ့ မြေးလေးဖတ်ဖို့ သူရေးတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးဖတ်ပြီး သူ့ ကို သတိရနေသေးတာ…
ပန်းချီရေးအရမ်းတော်သလို စာရေးပါကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်တယောက် အကြွေစောပြန်လို့မျက်ရည်ဝဲမိတယ် မ ရယ်…
i copied one picture.pls visit my blog.thanks.
ကိုပေါကလည်း တကယ်ကို မှတ်မှတ်ရရရှိတတ်တာပဲကလား..။
ဟုတ်တယ် မတန်ခူးရေ...သူ့လက်ကလည်း ဘသူနဲ့မှမတူ..။ အမတို့မှာ နှမျောရတာတွေ များလှပီနော်..။
ကျွန်တော် ဆရာဝသုန်ရဲ့ လင်္ကဒီပချစ်သူ ရုပ်ပြကို ဘယ်မှာ ရှာရမှန်းမသိဖြစ်နေပါတယ်....ဖြစ်နိုင်ရင်.....ရှာတွေ့နိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုခုကိုတော့ ညွှန်ကြားပေးပါလားခင်ဗျာ......
တကယ်လို့ အန်တီငြိမ်းမှာ ရှိရင်လည်း ကျွန်တော့ မေးလ်ကို ပို့ပေးပါလားခင်ဗျာ